နေအိမ် / Aceris ဥပဒေ SARL / နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု: နိုင်ငံတော်တစ်ကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမည်ဆီသို့ဦးတည်?
Aceris ဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိများနှင့်ဇွန်လရက်နေ့တွင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ် Co-sponsored တစ်ရက်-ညီလာခံ 2, 2017 ကနေကျောင်းသား Societies များမှ4ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်များ: အဆိုပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရှေ့နေများအစည်းအရုံး (ပဲရစ် 1 Pantheon-Sorbone), အဆိုပါ မာစတာအစည်းအရုံး2နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဥပဒေ (ပဲရစ်2Pantheon-Assas), အဆိုပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကျောင်းသားများ Nanterre ၏ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းမှ (ပဲရစ်ဝစ္စ Nanterre, La ကာကွယ်ရေး) နှင့်သိပ္ပံဖိုးအနုညာတစီရင် Society က (သိပ္ပံဖိုး) ပဲရစ်မှာဗဟိုဌာန Pantheon မှာ.
ပထမဦးဆုံး panel ကို၏ခေါင်းစဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ထိရောက်သောကာကွယ်မှုများ၏ယန္တရား၏ဆင့်ကဲခဲ့သည်. ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်အရည်အချင်းကိုနှင့်ခွင့်များအကြားခွဲခြားဆက်ဆံ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုနှင့်ခုံသမာဓိခုံရုံးအကြားခြားနားအလေ့အထများတွေကို. ဒုတိယ panellist အဆင်းလှသောနှင့်သာတူညီမျှကုသမှုစံဆွေးနွေးတင်ပြ, ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးပေး, ခုံသမာဓိလူကြီး၏အနက်ကိုရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးနောက်, စတိတ်ယခုတရားမျှတပြီးသာတူညီမျှကုသမှုဝါကျ၏အသစ်တစ်ခုအသုံးအနှုန်းမှတဆင့်၎င်း၏နယ်ပယ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ circumscribe လေ့. တတိယတင်ဆက်မှုအတွက်, က expropriation ဝါကျ၏အသုံးပြုမှုကိုအရေးပါမှုရရှိမှုခံရဖို့ပုံရသည်ကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီးခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောဝါကျ၏အတိုင်းအတာမရေမရာဖြစ်နေဆဲသော်လည်း. နောက်ဆုံး, Non-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစဉ်းစားနောက်ဆုံးအ panellist (အများဆုံးမျက်နှာသာလူမျိုးနှင့်အမျိုးသားရေးကုသမှုဝါကျ), Non-ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၏နိယာမ၏ express ကိုကန့်သတ်အပေါ်အထူးသထားခြင်း.
နောက်တစ်နေ့ panel ကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထိရောက်သောကာကွယ်မှုများကိုရည်မှတ်မကြာသေးမီကဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အလျောက်ငါတို့၌. ပထမဦးဆုံးတင်ဆက် protected ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အဓိပ္ပါယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့စတိတ်ခုံသမာဓိခုံရုံးအားဖြင့်လက်တွေ့တွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုဘယ်လို. ဒုတိယ panellist, ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် Cetas နှင့်အတူ, အမြန်စာချုပ်များအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေး derogations နှင့်ပြည်နယ်များ၏ထိန်းညှိဖို့လက်ျာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. တတိယ panellist ထို့နောက်နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်များအတွက်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ, ပညတ်တရား၏အကောင့်ထဲသို့တဖြည်းဖြည်းချင်းဆည်းပူးနေဆွေးနွေးတင်ပြ, ယင်းအလေ့အကျင့်မိတ်ဆက်နှင့်ဤဧရိယာ၌ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆွေးနွေးခြင်း. ဒီ panel ကကောက်ချက်ချရန်, နောက်ဆုံးတင်ပြချက်နှစ်နိုင်ငံနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံသဘောတူညီချက်များအောက်မှာအသစ်သောတာဝန်ဝတ္တရားမှတစ်ဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတာဝန်ရှိအောင်ပေါ်ခဲ့သည်.
တတိယ panel ကို၏ခေါင်းစဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများ၏ကာကွယ်မှုများအတွက်ခုံသမာဓိမှမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့အခြားနည်းလမ်းများနှင့်ဖြည့်ခဲ့. ဟောင်းတဦးစဉ်းစားခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပထမ panellist, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရည်မှတ်ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာတရားစီရင်မှု၏အမှန်တကယ်နှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းများကို. ဒုတိယတင်ဆက်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိအတွက်အနက်ဗဟိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, စာချုပ်များ၏နိဂုံးမတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီးဆုံးဖြတ်ရနိုငျသောမေးခွန်းတစ်ခုကို. တတိယ panellist အမျိုးသားရေးတရားရုံးမရောက်မီသွား၏အခွင့်အလမ်းကိုဆှေးနှေး, နျူကလီးယားကုမ္ပဏီကြီးအကြားနှင့်အထူးသဖြင့်အမှု Vattenfall နှင့်ရှေ့တော်၌ထိုဂျာမန်ပြည်နယ် ဖက်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေတရားရုံး. နောက်ဆုံး, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိများနှင့် Cetas အတွက်ပြဌာန်းသည့်ထူးခြားသည့်စနစ်တစ်ခုအယူခံယန္တရားကိုဖန်တီးရန်ကြိုတင်ကြိုးစားမှုသက်ဆိုင်ရာနောက်ဆုံးတင်ပြချက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည်.
နောက်ဆုံး panel ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုအတွက်စတိတ်၏တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း. ပထမဦးဆုံးအ panellist တတိယပါတီရန်ပုံငွေကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. ပြောသော, ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်မှုများနှင့်စာချုပ်များအတွက်၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှု (စင်္ကာပူ, ဟောင်ကောင်, Cetas) နှင့်ခုံရုံး၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတတိယပါတီရန်ပုံငွေအားဖြင့်ရင်ဆိုင်လာသောအခါ. ဒုတိယ panellist ထို့နောက်တတိယပါတီရန်ပုံငွေ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းကိုဆှေးနှေး, ဘဏ္ဍာရေးပြည်နယ်လုပ်ရပ်များမှအတားအဆီးနှင့်၎င်းတို့၏ငွေကြေးအပါအဝင်. တတိယတင်ဆက်မှုထို့နောက်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သစ်ကိုလမ်းကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား Urbaser v. အာဂျင်တီးနား ပြည်နယ်တန်ပြန်နှင့် ပတ်သက်. အမှု, ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေဖြစ်ပွညျထောငျစုအတှကျဖြစ်နိုင်ချေကိုငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသော်လည်း. ဒီကွန်ဖရကောက်ချက်ချရန်, ပြီးခဲ့သည့် panellist ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုအတွက်င့်လင်းမြင်သာများ၏မြှင့်တင်ရေးနှင့်အတိတ်ကျော်ကြပြီသောအလွန်ကြီးစွာသောခုန်အကြောင်းကိုပြောဆိုသော 10 ဤအမှု၌အနှစ်.
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ညီလာခံ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်«အတွက်အပြည့်အဝခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည် အဆိုပါအနုညာတစီရင်မှတ်စုစာအုပ် » (Editions Lextenso).
ချားလ်စ်မှ Maurice Mazuy, Aceris ဥပဒေ